Maya. 11 Dayrta 2020 - Abaalmarinta Wararka - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Maya. 11 Dayrta 2020
Salaan! Maaddaama cimiladu isu bedesho qabow, waxaan ku haynaa warar weyn oo ku jira joornaalkan oo wata waxyaabo qurux badan oo qalbigaaga diirinaya, iyo sidoo kale qaar mugdi ah oo kugu dhiirrigelinaya ficil weyn. Waxaan ka qaadnay sawirka kore safar shaqo oo aan ku tagnay Ireland dayrtii hore. Waxaa lagu xusaa ubax caan ah oo loo yaqaan 'Tralee'. Dhammaan jawaab celinta waxaa lagu soo dhaweynayaa Mary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Daahfurka 7 qorshe cashar oo bilaash ah
War Weyn! Hay'adda Reward Foundation waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inay soo bandhigayso qorshayaasheeda 7-da cashar ee aasaasiga ah ee Internet Pornography iyo Sexting ee dugsiyada sare, oo lacag la'aan ah. Waxaa jira Qoraallo Ingiriis ah, Mareykan ah iyo kuwo caalami ah oo la heli karo. Casharradu waxay waafaqsan yihiin (UK iyo Scottish) tilmaamaha dawladda ee xiriirka iyo waxbarashada jinsiga waxayna hadda diyaar u yihiin qaybinta. Qaabkeena gaarka ah wuxuu diirada saaraa maskaxda qaangaarka. Abaalmarinta Abaalmarinta waxaa lagu caddeeyey Kulliyadda Boqortooyada ee Dhakhaatiirta Guud ee sannadka 4aad iyada oo ah bixiyaha tababarka la aqoonsan yahay ee 'Pornography and Sexual Dysfunctions'.
Maxay muhiim u yihiin?
Maxay xor u yihiin?
Ugu horreyntii, dib-u-dhaca ku yimid waaxda dawliga ah tobankii sano ee la soo dhaafay waxay ka dhigan tahay in iskuuladu leeyihiin lacag aad u yar oo loogu talagalay casharada dheeriga ah. Marka labaad, dib u dhaca nasiib darrada ah ee hirgelinta sharciga xaqiijinta da'da (eeg sheekada wararka ee hoose) oo ka hortageysa carruurta yaryar inay ku turunturoodaan waxyaabaha qaangaarka ah, ayaa si aan macquul ahayn u horseeday koror iyaga ka helitaan bilaash ah, qulqulka, luuqda adag inta lagu jiro aafada. Habkaas kuwa ugu baahi badan ayaa heli kara qalab madax-bannaan oo ku saleysan cilmi-baaristii ugu dambeysay ee sayniska.
Fadlan naga caawi sidii aan u faafin lahayn duruusta. Haddii aad jeceshahay inaad naga caawiso howlgalkayaga ku-tabaruca, badhanka cusub ee deeq-bixiyeyaasha ayaa dhowaan la heli doonaa. Eeg casharrada halkan. Fiiri sidoo kale annaga blog iyaga on hordhac deg deg ah.
Halkan waxaa ah farxad, firfircoon video loo yaqaan, "Waa maxay jacayl?" xusuusin ah waxa aan fiiro gaar ah u leenahay iyo sida waxyaabaha yaryar ay muhiim u yihiin. Waa in aynaan indha indheyn hadafkan oo aan diirada saarnaa oo keliya halista ku xeeran isticmaalka sigaarka. Ku barbaarinta arrimaha jacaylka sidoo kale.
Taabashada jacaylka ayaa muhiim u ah samaqabkeena maxaa yeelay waxay naga dhigeysaa inaan dareemo badbaado, daryeel iyo wax kayar careysan. Goormaa kuugu dambeysay taabashadaada? Si aad wax badan uga ogaato, BBC waxay sameysay sahan loo yaqaan Tijaabada Taabashada oo ku saabsan dareenkan oo aan aad loo baarin. Sahankan ayaa socday intii u dhaxeysay Janaayo iyo Maarso ee sanadkan. Ku dhowaad 44,000 oo qof ayaa ka qayb qaatay 112 dal oo kala duwan. Waxaa jira barnaamijyo taxane ah iyo qoraallo ku saabsan natiijooyinka sahanka. Waa kuwan waxyaabaha muhiimka ah ee nooga yimid dhowr ka mid ah waxyaabaha la daabacay:
Taa bedelkeeda, qaab ka sii daran oo ah taabashada galmada ayaa ku sii kordheysa dadka da'da yar. Waa waxa warshadaha lulataaye iyo khubaradooda ay dib ugu magac dareen 'ciyaar ciyaar' ama 'ciyaar ciyaar' si ay ugu muuqato mid aamin ah oo xiiso leh. Maaha. Magaceeda dhabta ahi waa ceejin aan geeri lahayn.
Dr Bichard waa dhakhtar ka shaqeeya Adeegga Dhaawaca Maskaxda Waqooyiga Wales. Waxay ka hadlaysaa “dhaawacyo kala duwan oo ay sababeen ceejinta aan dhimashada lahayn oo ay ku jiri karaan wadnaha oo istaaga, istaroog, dhicis, saxarada oo haysa, cilladaha hadalka, qallalka, curyaannimada, iyo noocyada kale ee dhaawaca maskaxda muddada dheer.” Eeg annaga blog waxa on.
Shirka Jiritaanka Xaqiijinta Da'da Juun 2020
Haddii aad rabto inaad ogaato sida aan u yareyn karno carruurta fursad ay u helaan noocyada qaawan ee soo jiita rabshadaha galmada, waad xiiseyn kartaa tan. Hay'adda 'Reward Foundation' waxay xagaagii la shaqeysay John Carr, OBE, Xog-hayaha Isbahaysiga Samafalka Carruurta ee Boqortooyada Midowday ee Amniga Internetka, si loo soo saaro shirkii ugu horreeyay ee Xaqiijinta Da'da ee ku saabsan sawir-gacmeedka. Waxay ka dhacday 3 maalmood iyo badh bishii Juun 2020 iyada oo in ka badan 160 kaqeybgalayaashu ka kala yimaadeen 29 dal. U-doodayaasha daryeelka carruurta, qareennada, aqoonyahannada, saraakiisha dawladda, dhakhaatiirta neerfaha iyo shirkadaha teknolojiyadda ayaa dhammaantood ka soo qaybgalay. Eeg annaga blog dusheeda Waa tan warbixintii ugu dambeysay ka socda shirka.
Tilmaamaha Waalidiinta ee Bilaashka ah ee Filimada Internetka
Waxaan u cusbooneysiineynaa hagaha waalidiinta si joogto ah marka ay jiraan macluumaad cusub oo lagu daro. Waxaa ka buuxa talooyin, fiidiyowyo iyo ilo kale si looga caawiyo waalidiinta inay fahmaan sababta ay maanta u ka duwan tahay porno la soo dhaafay iyo sidaas darteed waxay u baahan tahay kala duwan hab. Waxa jira degello internet iyo buugaag, tusaale ahaan, oo waalidiinta ka caawiya inay la yeeshaan sheekooyinkaas adag ee carruurtooda.
"Waxaan nahay waxa aan ku celcelino"